OLS Mahotera & Resorts inosimbisa kuvepo muHawaii nekugadzwa kwakakosha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » OLS Mahotera & Resorts inosimbisa kuvepo muHawaii nekugadzwa kwakakosha
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Zimbabwe Breaking News • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau
OLS Hotels & Resorts inodada kuzivisa kugadzwa kwenzvimbo nhatu dzakakosha dzekutungamira mukati mekambani ye Honolulu eTN yakataurirana neRose Ruzhinji Hukama kutibvumidza isu kubvisa iyo paywall yeiyi midhiya kuburitswa. Pakave pasina mhinduro zvakadaro. Naizvozvo, isu tiri kuita kuti ichi chinyorwa chakakodzera chiwanikwe kuvaverengi vedu tichiwedzera paywall
OLS Hotels & Resorts, inotungamira kambani manejimendi hotera yemakumi maviri nemaviri emahotera nemaresitoreti muUS, inodada kuzivisa kugadzwa kwenzvimbo nhatu dzakakosha dzekutungamira mukati mekambani. Honolulu dzimbahwe: Nicole Darity semukuru wezvekutengesa, Hawaii, Alyson Wee semaneja wemari uye Steve Keller semutungamiriri. Neruzivo rwavo rwakakura uye ruzivo mumusika weHawaii, nhengo dzechikwata nyowani dzichaita chinzvimbo chakakosha muOLS Mahotera & Resorts 'kuwedzera muHawaii. Iyo manejimendi kambani parizvino inoshandisa matatu mahotera muHawaii, Hotel Renew muWaikiki, Oahu, Kudyara Hale Suites muKapaa, Kauai, uye Banyan Harbour Resort muLihue, Kauai, ine zvirongwa zvekuvandudza nekugadzirisa zvimwe zvivakwa zvemaboutique muzvitsuwa zvacho. Iine timu yayo nyowani yeHawaii iri panzvimbo, OLS Hotels & Resorts ichatarisa pakuzadza mutengi kudiwa kune yakasarudzika, yakazvimiririra zvivakwa nepo ichiunza nyowani, yemuno maonero kune ayo mahotera mashandiro.
"Tinofara kugamuchira Nicole, Alyson naSteve sechikamu cheOLS 'nyeredzi-timu muHawaii," akadaro Ben Rafter, mukuru mukuru weOLS Hotels & Resorts. "Chikwata ichi chine ruzivo rwekutarisira zviuru zvemakamuri muHawaii, saka tine chivimbo chekuti ichave midziyo inokosha mukuzadzisa zvinangwa zvitsva nekuenderera mberi nekukura kwedu semutungamiri wemusika."
Darity inobatana neOLS Hotels & Resorts semutungamiriri wekutengesa, Hawaii, ichitarisa kumauto, hurumende, epasi rese uye epamba rese. Pamberi peOSS, Darity aive director wezvekutengesa kweanopfuura makore mashanu kuAca-Aston Hospitality kwaaitarisa kumisika yemasoja nehurumende. Pakutanga, Darity aive director wechikoro chakazvimiririra, St. Philomena Pakutanga Yekudzidza Center, kwaakabudirira kuiunza kubva kunenge kuvhara kune chimwe chezvikoro zvakatsvakwa zvakanyanya paOahu. Darity zvakare ane ruzivo semutungamiriri uye zvirongwa maneja kuUSO Hawaii. Anobata dhigirii reBachelor mune bhizinesi manejimendi neyakagadziriswa mune ruzivo ruzivo kubva kuColorado technical University.
Saiye mutariri wemari nyowani, Wee ane basa rekuvandudza, kusimudzira uye kutungamira masystem ekuchengetedza mari uye maitiro akanakisa eOLS 'Hawaii zvivakwa. Iye anotarisisawo pakuvaka zviyero, kubatana uye kugovera. Asati ajoina OLS, akashanda semaneja wemari yeAca-Aston Hospitality kwaaitarisa kune akati wandei zvivakwa zveHawaii, kubva kubhajeti kusvika kumusoro, uye kubudirira kuwedzera uye kukanganisa zvakakosha metric metrics uye makiyi ekuita mashandiro. Asati maindasitiri ekugamuchira vaeni, aishanda kufemu yemutemo yemhuri uye femu yemutemo yezvivakwa. Anobata dhigirii reBachelor mune bhizinesi manejimendi kubva kuYunivhesiti yeHawaii kuManoa.
Mune rake basa nyowani semutongi, Keller anoona nezvese mashandiro emari kuwedzera mari yezvivakwa zveHawaii. Anounza makore anopfuura makumi maviri nerimwe ane ruzivo mune zvemari uye mashandiro kuOLS uye anofara kuvezve ari muindasitiri yekugamuchira vaenzi mushure memakore matatu semutungamiriri weMarathon Group, iro guru rekurima uye mutengesi wemakemikari muHawaii. Pakutanga, Keller aive mutungamiriri wemakambani eAqua Hotels uye Resorts kwaaitarisira makumi maviri nemasere hotera uye nzvimbo dzekushanyira munzvimbo nhanhatu dzeHawaiian Islands neGuam. Anobata Master of Business Administration mune zvemari uye Bachelor yeSainzi mune bhizinesi manejimendi, hotera neresitorendi manejimendi kubva kuYunivhesiti yeDenver.